Ny Davinci New Black Design an'ny Blackmagic dia mamaha ny fanalahidin'ny fanoratana dia manatsara ny fanitsiana ny hafainganana ho an'ny mpamorona votoaty | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Blackmagic Design's New DaVinci Resolve Editor Keyboard dia manatsara ny hafainganam-pandehan'ireo mpamorona atiny
Blackmagic Design's New DaVinci Resolve Editor Keyboard dia manatsara ny hafainganam-pandehan'ireo mpamorona atiny
Ny votoatiny noforonin'ny mpamorona dia tsy manam-paharoa raha toa ka mitsangana, indrindra rehefa manatrika mpihaino iray izy ireo. Tsy maintsy misy dikany ny atiny sy ny marika ataon'ny mpanamboatra. Mandritra izany fotoana izany, ny mpamorona dia mila mandinika ny habetsaky ny kojakoja ilaina amin'ny orinasa toy ny Blackmagic Design afaka manampy amin'ny famelomana azy ireo amin'ny iraka ampanaovina azy ireo tsy hamorona votoaty tsara indrindra any fotsiny. Fa koa ny mpihaino tsara indrindra azon'izy ireo ifandraisana. Izay no Blackmagic Design tonga eo amin'ny sary, ary miaraka amin'ilay vaovao DaVinci Hamaha ny Keyboard an'ny Editor, ny famoronana votoaty dia ho dingana iray mora kokoa ho azy ireo ho an'ny mpamorona votoaty talenta marobe miasa amin'ny indostrian'ny fahitalavitra.
Raha misy Blackmagic Design mamorona, ivelan'ny majika, dia sasany amin'ireo vokatra fanovana horonantsary faran'izay avo lenta indrindra eto an-tany. Marina izany, nanomboka tamin'ny 2001, ny orinasa amin'ny sinema nomerika dia nanamboatra vokatra nanomboka
Mpandika horonan-tsary tena misy
Ireo vokatra rehetra ireo dia natao ho an'ny indostrian'ny sarimihetsika sy ny famolavolana sy ny fahitalavitra. Ohatra iray amin'ny Ny vokatra Blackmagic Design misy ny karatra DeckLink fisamborana azy, izay nanomboka fiovàna tamin'ny kalitao sy ny fahaiza-manao ao amin'ny tontolon'ny famokarana taorian'ny famokarana. Ity karazana fanovana ity koa naseho tamin'ny alàlan'ny Emmy ™ loka nandresy DaVinci vokatra fanitsiana loko, izay nandresy ny indostrian'ny fahitalavitra sy ny sarimihetsika.
Blackmagic Design tsy misy farany ny fanodinana fanavaozana ahitana ny vokatra 6G-SDI sy 12G-SDI, ary koa ny stereoskopika 3D ary Ultra HD workflows. Ary miaraka amin'ilay vaovao DaVinci Hamaha ny Keyboard an'ny Editor, hitohy ny làlany mankany amin'ny fahombiazana mahomby.
Kitendry Editor an'ny DaVinci Resolve an'ny Blackmagic Design tsy mihoatra izany afa-tsy ny fitendry tsotra. Ity Keyboard manokana ity dia natao ho fitaovana fanovana hafa, izay mampitombo ny hafainganam-pandeha kokoa noho ny totozy. Raha ny marina, ny DaVinci Hamaha ny Keyboard an'ny Editor afaka manampy ny mpanjifa hampiasa tanana roa miaraka amin'ny fotoana mitovy, ary afaka manome azy ireo ny valin-tenim-pikarohana iraisana izay miorina tsara eo amin'ny fitendry.
Blackmagic's DaVinci Resolve Editor Keyboard manana famolavolana metaly rehetra, izay mahery vaika kokoa ary io no vokany raha natao ho an'ireo tonian-dahatsoratra matihanina izay nandany ny androny nandritra ny ora maro nandritra ny ora maro, izay tsy isalasalana fa hiteraka fangatahana vahaolana fitendry premium. Tsy toy ny kitendry maoderina misimisy misy fanalahidy fisaka, ny lakilen'ny Keyboard dia manana mombamomba miorina, izay manamora ny fahatsapan'ny mpampiasa ny fomba manodidina azy. Ny switch key dia karazana mitovy ampiasain'ny keyboard eSports ary ny lakile tsirairay dia voamarina mandritra ny hetsika iray tapitrisa mahery. Ny milina fikarohana voarindra dia milina avy amin'ny vy mafy ary mamela ny fitantanana sy ny fanaraha-maso tena mazava tsara. Ary koa, ny takelaka fanalahidy, fitsaharana tànana ary fanovana fanalahidy dia azo ampiasaina ho toy ny kojakoja fitehirizana, ary amin'izay dia azo hamelombelona sy hamboarina ny fitendry
The DaVinci Resolve Editor Keyboard's mpanjifa tena haingam-pandeha mba ahafahan'izy ireo mampiasa tanana roa rehefa manitsy. Raha te hampiasa ny tanany havanana ny mpanjifa mba hifehy ny toerana amina clip, raha ny tanany havia kosa mametraka teboka sy teboka ary koa ny fampiharana fanovana na ny mifamadika amin'izany, tsy misy fetra maoderina maoderina misakana tsy hanao izany. Miaraka amin'ny DaVinci Hamaha ny Keyboard an'ny Editor ny mpanjifa dia mahay mamindra, manisy marika ary mivoaka, mampihova fanovana, avy eo mihetsika, miverimberina, mandimby ary miverimberina.
Ny diera fitadiavana fikarohana ao amin'ny fitendry dia metaly metaly misy sarona fingotra, izay mahatsapa tena mahafinaritra ho an'ireo mpampiasa, ary ho tsapan'izy ireo hatrany fa manana fifehezana matanjaka amin'ny sarimihetsika DaVinci Resolve na ny fandaharam-potoana izy ireo. Misy ihany koa ny clutch elektronika mitambatra izay miteraka fijanonana farany rehefa ampiasaina amin'ny fivezivezena sy ny toerana, eo ambanin'ny fifehezana rindrambaiko rehetra. Miaraka amina bearings marobe, malefaka be ny dial fikarohana ary azo alefa ao anaty maody jog izy mba hamelana horonana ara-potoana voajanahary.
Ny fanitsiana Keyboard dia misy koa ny fametrahana fanalahidy fototra qwerty, izay nohavaozina tamin'ny alàlan'ny famoahana hevitra avy amin'ireo mpanonta matihanina. Na eo aza izany dia mbola afaka miditra amin'ny endri-javatra nentim-paharazana rehetra ny mpampiasa ho an'ny fanapahana sy fanitsiana pejy ao amin'ny DaVinci Resolve, noho izany dia mbola miasa amin'ny fomba mahazatra ihany ny singa qwerty fototra amin'ny fitendry. Ny maoderina fanovana mahazatra dia ampidirina amin'ny fitendry lehibe. Saingy ny mpanjifa dia mbola mahazo endrika vaovao amin'ny fanavaozana nohavaozina, ary tafiditra ao izany ny bokotra mpijery izay mamela ny fanovana eo noho eo ny fijerin'ny sary feno. The DaVinci Hamaha ny Keyboard an'ny Editor na dia manamboatra ny fanovana avy amin'ny fitendry mihitsy aza ianao
Amin'ny fanampiana fanehoan-kevitra fanampiny amin'ny fisehon'ny DaVinci Resolve Editor Keyboard, Blackmagic Design Hoy ny CEO CEO Pet Petty: “Izahay mieritreritra fa vokatra mampientanentana be ity satria misy fiovana be amin'ny workflow toa io. ” Nanohy ny teniny i Petty "Nandritra ny taona maro, ny fanitsiana an-tsokosoko dia noheverina ho fomba efa taloha, ary izao dia namboarinay ireo tombony ireo ho an'ny fanovana maoderina maoderina. Tsy mino aho fa tsy nisy olon-kafa nieritreritra an'io taloha ary gaga izahay tamin'ny hafainganam-pandehanay manamboatra rehefa mampiasa tanana 2 amin'ny DaVinci Resolve Editor Keyboard vaovao! ”
Ireto misy ny fampidirana Keyboard an'ny DaVinci Resolve Key Features:
Ny famoronana vy rehetra ho an'ny tanjaka mitombo
Manome fanovana haingana kokoa noho ny mety amin'ny rindrambaiko NLE
Ny fifehezana fanaraha-maso mikambana amin'ny fitadiavana
Ny kaonty loharano dia mamela ny fikarohana haingana haingana
Ny bokotra hamerenany indray ireo fanodinana avy hatrany
Bokotra lehibe miditra sy mivoaka
Modely fanalahidy vaovao ho an'ny fanitsiana manan-tsaina
Tombanana hamela ny fanadihadihana fitadiavana hiaina mivantana
Bokotra hanovana ny karazana tetezamita
Nandaina ny DaVinci Fivoarana ny takonana fitendry
Keypad ho an'ny fidirana timecode mivantana
Azo apetraka ao anaty lavaka nolavahana tao anaty consoles fanovana
Raha mila fanazavana fanampiny eo amin'ny DaVinci Resolve Editor Keyboard, tsidiho www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/edit.
Maninona raha mandeha Blackmagic Design
Ho fanampin'ny fananana vokatra fanovana horonantsary avo lenta mahavariana. Blackmagic Design mahatonga ny traikefa sinema hahafinaritra kokoa ho an'ireo mpamorona atiny miasa amin'ny indostrian'ny fampielezam-peo sy ny mpihaino azy. Na inona na inona fahitalavitra mitady fakantsary nomerika, mpandova famokarana mivantana na mpanamory kalitao fotsiny, dia tsy ho diso fanantenana izy ireo amin'ny kalitaon'ny asa. Blackmagic Design mamokatra ho ampahany amin'ny asa nanirahana azy mba hanampiana ny famokarana tena mamorona.
Raha mila fanazavana fanampiny momba Blackmagic Designdia tsidiho ny www.blackmagicdesign.com/.
6G-SDI sy 12G-SDI Blackmagic Design fampitana orinasa Mpanitsy loko afa-po Content Creation DaVinci vokatra fanitsiana loko DaVinci Hamaha ny Keyboard an'ny Editor Karatra fisamborana DeckLink orinasa amin'ny sinema nomerika Fakantsary horonantsary nomerika Mpanoratra kapila endri-javatra sarimihetsika Grant Petty Mpanova mivantana ny famokarana lahatsoratra famokarana Mpandika horonan-tsary tena misy router indostrian'ny fahitalavitra Video niova fo vokatra fanovana horonantsary lahatsary fanaraha-maso Ny mpanara-maso Waveform 2020-05-10
Previous: Famoronana Visual Visual sy Famokarana Video